အညာသား - Yangon Media Group
နံနက်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နားကအဖြတ်ဆိုင်အတွင်းထဲက အသံကြားလိုက်ရတယ်။ အမေနဲ့နေတုန်းကတည်းက အပြင်အစားအစာမစားစေဘဲ အိမ်မှာပဲစားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့လို့ ရန်ကုန်ကိုရောက်တာကြာပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ထိုင်တာနည်းတယ်။ နံနက်ခင်း ထမင်းကြမ်းနဲ့ ပဲပြုတ်သုပ်စားလိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိသလို တစ်နေ့လုံးအင်အားတွေပြည့်တယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ကော်ဖီမစ်ကို ဝယ်ထားပြီး သုံးမိနစ်ရေနွေးအိုးနဲ့တည်လိုက်ရင် စိတ်ကြိုက်သောက်လို့ရတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမှမဆိုင်သလို ဖြစ်နေတာမဆန်းပါဘူး။ အဲဒီလို တစ်ခါတစ်ရံသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခါ၊ ထိုင်တဲ့အခါတော့ ရှိတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အညာသားဆိုအောက်သားတွေက ရိုင်းတယ်။ ယဉ် ကျေးမှုမရှိဘူးဆိုပြီး အချို့ကပြောတတ်ကြပြန်တယ်။ ဥပမာ အလုပ်တစ်ခု လုပ်စရာရှိလို့ခိုင်းရင် ”ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်” ”ရပြီ ခင်ဗျားသွားတော့ လှည့်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီး ရင်ဝကိုဗုန်းခနဲနေအောင်ပုတ်ပြီး”ဘွင်းဘွင်းပဲပြောတယ်။ တစ်ဖက် လူ အမြင်တော့ ဒီစကားက ရိုင်းသလိုရှိတာပေါ့။ ထားတော့ ခုနစကားဆက်ရရင် အညာသားတွေက ဘဝနာကြတယ်။ ဒီတော့ကြိုးစားကြတယ်။ တကယ်မသုံးမဖြစ်တဲ့ အရာဆိုမသုံးကြဘူး။
ဘန်ကောက်ရှိ နာမည်ကြီးအနှိပ်ခန်းကို ထိုင်းရဲဝင်စီး၊ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အဓမ္မခိုင်းစေခံရသည့်ြ?
ဆော်ဒီ-အီရန် တင်းမာမှု မြင့်တက်နေချိန် ပြင်သစ်သမ္မတ မက်ခရွန် ရီယာ့ဒ်မြို့သို့ သွားရောက် လည်ပ?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကုန်တင်သင်္ဘောကို ဖမ်းဆီးမှု မြောက်ကိုရီးယား သံတမန် သတိပေး
ဒုတိယနေရာမှာ မန်ယူနှင့် ထိုက်တန်ကြောင်း ဝေဖန်မှုများအား မော်ရင်ဟို တုံ့ပြန်